नागरिक समाजका अगुवा डा.दीक्षित भन्छन्, ‘प्रचण्डहरु जारजस्तै शासक बनेपछि विप्लवलाई साथ दिनुपर्छ’-Nepali online news portal
हामी केही मात्रामा सन्तुष्ट त छाँै किनकि बोल्न पाइएको छ तर ओली सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजिरहेको छ । अहिलेको जस्तो अवस्था राजतन्त्रमा थिएन । तर हामीले जुन प्रगतिको आशा गरेका थियौँ त्यो पूरा भएको छैन । त्यो न २०४६ सालमा भयो, न त ०६२–०६३ पछि नै भयो । हामीकहाँ त पटके आन्दोलन र पटके सहिद भए । यस्तो संसारमा कतै पनि हुँदैन । संसारमा एकपटक आन्दोलन भएपछि त्यो आन्दोलन उद्देश्यमा गएर टुङ्गिन्छ र त्यसबाट जनताले राहत पाउँछन् । हामीकहाँ कुनै पनि आन्दोलन वा रेभुलेसन टुङ्गिएन । सम्झौतामा मात्र गयो । सम्झौतामा जानेबित्तिकै त्यहाँ चलखेल हुँदोरहेछ । त्यहाँ शक्ति र पैसाको ठूलो चलखेल हुँदोरहेछ । त्यसपछि रेभुलेसन उठाउने ब्यक्तिहरू पनि त्यसमा मुछिँदा रहेछन् । त्यसैले आजको हाम्रो अवस्था जुन छ त्यो सन्तोषजनक पटक्कै छैन । हामीले संविधान पायौँ । संविधान जारी भएकै दिनमा त्यत्रो कफ्र्यु लाग्यो । मान्छेहरू मारिए । तराईमा कालो दिवस नै मनाए । यतातिर जनजाति, दलित असन्तुष्ट छन् । मधेसमा त आगो नै बलेको हो । त्यसरी हेर्दाखेरि संविधानलाई उत्कृष्ठ भन्नु मेरो विचारमा त्यो बेबकुफी हो । त्यसलाई जेजति संशोधन गर्नुपथ्र्यो, गरेको भए हुने थियो, अहिलेसम्म केही संशोधन भएको छैन । यहाँ समृद्ध नेपाल भनिएको छ तर म केही समृद्ध देख्दिनँ । यो सरकार बनेदेखि, यो संविधान बनेदेखि कुनै उद्योग फस्टाएको देखिँदैन, बरु गिरेकै छ । कृषि क्षेत्र धराशयी बनेको छ । किसानहरू, हाम्रा कामदारहरू दिनहुँ चार हजारको सङ्ख्यामा विदेश गैरहेका छन् ।
युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिन नसकेपछि नोकरको पनि चाकर बनाएर विदेश पठाएपछि कसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ? रोजगार दिन नसक्ने अवस्था भएपछि देशमा कसरी प्रगति र समृद्धि हुन्छ । समृद्धिको मापदण्ड त त्यहीँनेर छ । हामी नेपाली बडो गर्वका साथ भन्छौँ– मलेसियासँग, यो वा त्यो देशसँग यो सम्झौता गरेका छौँ । हाम्रा कामदारले योयो अधिकार पाउँछन् भन्छौँ, लाज लाग्दैन । हामी आफ्नो देशका युवा शक्ति विदेश पठाउँछौँ तर यति पैसा आयो भनेर गौरव गर्दछौँ । देशमै रोजगार खोइ ? कृषि उत्पादन खोइ ? हो, देशमा मिडिया फस्टाएको छ । सबैतिर स्कुल र कलेजहरू खोलिएका छन् । यसको प्रक्रिया त पहिले पनि थियो । सामाजिक हिसाबले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । मानवअधिकारको अवस्थाको कुरा गर्दा एउटा निर्मला हत्याकाण्डका बारेमा कुरा गरौँ । योभन्दा पनि पहिले र पछि यस्ता हत्याकाण्डहरू भएका छन् । एउटा हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैनन् र लगाउनसक्ने ठाउँमा पनि अघि बढ्दैनन् । त्यसका प्रमाणहरू खतम पारिएको छ । थाहा छ नि तिनीहरूलाई किन केरकार नगरेको ? एउटा सोझो व्यक्तिलाई बकाएर म हत्यारा हुँ भनाउने पुलिस त्यहीँ छन् । डीएनए त बिलाएर जान्छ । अनि चुपचाप भयो । त्यो गुपचुप भयो । त्यहाँ पनि सन्तोषजनक काम त भएन । अब यस्तै अरू कति छन् कति । सबभन्दा बढी मलाई चित्त दुखेको कुरा के हो भने हामीले जनताका छोराछोरीलाई उठाएका हौँ । सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडेका ब्यक्तिलाई माथि पु¥याएका हौँ तर आज राष्ट्रपति क्विन भिक्टोरिया बनेकी छिन् । हामीले क्विन भिक्टोरिया जन्माएका छौँ । कफ्र्यु हामीले पनि तोडेका हौँ । मैले पनि दुई दुईपटक तोडेको हुँ । हामीलाई गोली हान्न पनि सक्थे । हामीले त्यस्तो गरेको रानी भिक्टोरिया जन्माउनका लागि थिएन । आज राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ छ भनेर सर्वसाधारण चढ्ने सबै साधन बन्द गरिदिने ?
पहिलो कुरा त विप्लवजीहरूले जे आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो जनयुद्ध होइन । तपाईंहरू देखाउनुस् सरकारले योयो गल्ती गरेको छ । आयल निगमले के गरेको छ, त्यसमा विरोध गर्नुस् । सडकमा बस किन खस्छ, हामी यो धुलाम्मेमा किन हिँड्नुपर्छ । जति मुद्दाहरू छन् अहिले यो सरकारको विरोध नै गर्दिनुस् न । राजनीतिक पार्टीहरूको विरोध गर्दिनुस् न अनि जनताले साथ दिन्छ । विप्लवजीहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ । सरकारलाई ‘अट्याक’ गर्नुस् । सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुस् । पार्टी र नेताहरूको विरोध गर्नुस् । आमनागरिकलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसो गर्नुभयो भने जनताले साथ दिन्छ विप्लवजीहरूलाई किनभने तपाईंहरूले उठाएको माग जायज छ । मैले त्यतिबेला पनि भनेका थिएँ प्रचण्डलाई– तपाईंहरू आउन त आउनुभयो । बुलेटको सोझो गोली त बुझ्नुहुन्छ तर राजनीतिमा जुन बाङ्गोटिङ्गो जुन खतरा छ त्यो बुझ्नुहुन्न । तपाईंलाई गिरिजाले फसाउँछ । नभन्दै एकपछि एक नाकमा नत्थी लगाउँदै लगे । आखिर
कटुवालकाण्डदेखि प्रचण्डलाई खत्तम नै पा¥यो आज प्रचण्डको अवस्था हेर्नुस् त । मैले त जनाउ दिएकै हो । म विप्लवजीहरूलाई पनि त्यही भन्दैछु अहिले । विप्लवले गोली चलाउने त होइन । राजनीतिमा आउनुछ उहाँलाई । अन्ततः बच्चासम्मले विप्लवलाई साथ दिन्छन् । eratokhabar